मम खानेहरुलाई लाग्न सक्छ यो खतरनाक रोग::kamananews
मम खानेहरुलाई लाग्न सक्छ यो खतरनाक रोग
एजेन्सी । मम बनाउन मैदाको प्रयोग गरिन्छ । मैदाबाट बनेको मम दैनिक खानु शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हिजोआज हरेक गाउँदेखि सहरका गल्लीमा सहजै उपलब्ध हुने मम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मम होस् वा अन्य मैदाबाट बनेको अन्य खानेकुराको साइड इफेक्ट हुन्छ । मैदा गहुँको परिस्कृत आँटा हो । यसमा फाइबर हुँदैन । मैदालाई सेतो तथा चमकदार बनाउन बेन्जोइल परअक्साइडले ब्लीच गरिएको हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुन्छ ।
मम वा मैदाबाट बनेका खानेकुरा खाँदा हुने नकारात्मक असरहरु :
१. मैदा खाँदा शरीरमा सुगरको मात्रा बढ्छ, किन कि यसमा हाइ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हुन्छ ।
२. ब्लड सुगर बढ्दा रगतमा ग्लुकोज जम्ने गर्छ । जसले गर्दा शरीरमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ । यसले मुटु सम्बन्धि रोग लाग्ने गर्छ ।
३. ममको अत्याधिक सेवनले कब्जियतको समस्या हुन्छ । यसले टाउको दुख्नेलगायतका समस्या निम्त्याउँछ ।
४. जुन मानिस नियमित रुपमा मैदाबाट बनेको मम वा अन्य खानेकुरा खान्छ उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ ।
५. मैदा बनाउँदा निकालिएको प्रोटिनका कारण मैदामा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । जसले गर्दा शरीरका हड्डी कमजोर हुन्छन् ।
अब के को र कसको बिश्वास गर्ने ? ब्रोइलर कुखुराको मासु खाँदा १ को मृत्यु, ४ जना बिरामी, यस्तो छ घटनाको शिलसिला
सल्यान – सल्यानमा ब्रोइलर कुखुराको मासु खाँदा एक बालिकाको ज्यान गएको छ । अन्य ४ जना बिरामी भएका छन् । बुधबार राति घरमा पकाएको ब्रोइलरको मासु खाँदा १० वर्षीया बालिकाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको...
बच्चा बनाउने प्लानमा हुनुहुन्छ ? कुन समयमा यौनसम्बन्ध राख्दा भइन्छ गर्भवती ?
विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आइरिन थाल्छन्, खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? उता दम्पतीको ताक अर्कै हुन्छ । पहिले करिअर निर्माण अनि मात्र फेमेली प्लानिङ । हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना...
खाने गर्नुहोस काँचो केरा अनि मुक्त हुनुहोस यस्तो ठुलो रोगहरुबाट
एजेन्सी : केरा मानिसले सबैभन्दा बडी उपभोग गर्ने फलमा पर्छ । केरा निकै स्वादिलो र अरु फल भन्दा सस्तो हुने भएकाले पनि प्राय मानिसले यसलाई रुचाउने गर्छन् । केरा हामी बर्ष भरी नै बजारमा...
अब गर्मी शुरु भयो कसरी गर्ने स्वास्थ्यको ख्याल ?
हामीले अनुभव गरेकै छौं, गर्मी बढेसँगै पखला लाग्छ, खानेकुरा पच्दैन, फूड प्वोइजन हुन्छ । यहिबेला हो, छालाको संक्रमणदेखि टाउको दुख्नेसम्मको समस्या हुने । गर्मीमा शरीर आलस्य हुन्छ । थकाई लाग्छ । काम गर्न जाँगर...
लुकीछिपी डाक्टरी गर्दै उत्तर कोरियाली, मेयरविरुद्ध उपमेयर अनशनमा !
६ चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले फरक–फरक विषयलाई समाचारको रुप दिएर पस्केका छन् । केहीले राजनीतिक विषयलाई पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् भने केहीको प्राथमिकतामा आर्थिक, सामाजिक विकृतिका विषय परेका छन्...
बहराइनमा बैचारिक संगठनको संयोजन तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न ।
कृष्ण हमाल / बहराइन यही १६ मार्च २०१८ का शुक्रबारका दिन सल्मानिया मेडिकल कम्प्लेक्सको ब्लड डोनेसन हलमा बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म संयुक्त रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाली राजदुतावास बहराइनका राजदुत सो...
१५ वर्षमै यौन सम्पर्क !
‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि ।’ शारीरिक तथा मानसिकरूपमा २० वर्षपछि मात्र युवायुवती बिहेका लागि योग्य हुन्छन् । तर, अहिलेको परिदृश्य फरक छ । उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने र आमा बन्ने क्रम बढ्दो छ । जसका...
बिदेशवाट आएपछि यौनसम्पर्क राख्छु भन्छ, म के गरु ?
मेरो एउटा साथी छ । ऊ युएईमा छ । हामी एक–अर्कालाई चाहन्छौं । ऊ केही दिनपछि नेपाल आउँदैछ । ऊ मसँग यौनसम्पर्क राख्ने कुरा गर्छ, तर ममा त्यस्तो चाहना छैन, म के गरूँ ? साथीसँगको...
सेक्स गर्ने क्रममा आवाज निकाल्नुका फाइदा यस्ता
प्राय महिला र केहि पुरुषहरु समेत सेक्सका क्रममा आवाज निकाल्ने गर्दछन् । हाम्रो परम्परागत नेपाली समाजमा भने प्राय महिलाले चाहेर पनि आवाज निकाल्ने हिम्मत गर्दैनन् ।काठमाडौं डेली तर अव समय परिवर्तनन भएको छ र...
गर्भावस्थामा पेट किन दुख्छ ?ध्यान दिनुहोस यी कुराहरुमा
गर्भावस्था महिलाको जिवनकै विशेष अवस्था हो । गर्भावस्थामै एउटी महिलाले आफूलाई पूर्ण भएको अनुभव गर्छिन् । महिलाले जस्तोसुकै पिडा सहेर पनि बच्चालाई जन्म दिने गर्छन् । गर्भावस्थाको महत्व वयान गरिरहदा यसको जटिल पक्ष भने हामीले...
मलाइ मजाकमा नउडाउनुस , २ वर्षमा रेल कुद्छ, नेपालको पानीजहाजमा मान्छेहरु आवत जावत गर्छन: प्रधानमन्त्री ओली
१० चैत २०७४ ,चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र रेल सेवा संचालनमा ल्याउने दाबी गरेका छन् । रेलसँगै नेपालको पानी जहाज
जनकपुरको ‘बदनाम रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस’: जहाँ चिट चोरेर पास हुन पाइन्छ (भिडियोसहित)
१० चैत २०७४ ,जनकपुरधाम: मिथिला क्षेत्रमा उच्च गरिमा कायम गरेको जनकपुरस्थित रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस परीक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा पछिल्लो समय बदनाम हुदै गएको छ
कस्तो अचम्म: सेनाको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी भेटिए, १२ जना पक्राउ
१० चैत, २०७४ ,काठमाडौं । नेपाली सेनाले लिएको सैन्यतर्फको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी सहभागी भएको भेटिएको छ । शनिबार विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट ११ जना
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अफेयर रहेको दावी गर्ने यी तीन महिला
१० चैत,२०७४ ,काठमाडौं । प्ले ब्वाई म्यागेजिनकी पूर्व मोडल क्यारन म्याकडगलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पसँग माफी मागेकी छन् । उनको दावी
आजदेखि सवारी चालक र सहचालकलाई पोशाक अनिवार्य
काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी चलाउने चालक तथा सहचालकले आजदेखि अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल यातायात व्यवसायी